OGAYSIIS MUHIIM AH: Daraasadda Doorka Qurbajoogga ee Maalgashiga Ganacsiga Dalka Jamhuuriyadda Somaliland + DIWAANGELIN | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Qurbajoogga Somaliland waxa ay kaalin weyn ku leeyihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka jamhuuriyadda. Qurbajoogga jaalliyadaha wadamo kala duwan ayaa sannad walba dib ugu soo noqda dalka oo maalgashada ganacsiyo kala duwan oo dhinacyada dalxiiska, warshadaha, caafimaadka, waxsoosaarka, iyo sidoo kale ganacsiga adeegyada kala duwan ee ku habboon magaalooyinka. Waxa ay sidoo kale qurbajooggu ka qaybgaleen ganacsiga guud ee soo dejinta badeecadaha kala duwan iyo dhoofintaba kuwaasoo isugayntooda qayb ka ah shaqo abuurka iyo koboca dhaqaale ee dalka. Waxa lagu qiyaasaa in qurbajooggu dalka usoo xawilaan maaliyad xadigeedu u dhexeeyo $500 malyuun illaa $900 malyuun oo dollar sannadkiiba taasoo ay ku jirto doorka ay ku leeyihiin ganacsiga kala heerarka duwan ee ay soo maalgashadaan. Waxana guud ahaan lagu qiyaasaa kaalinta ay qurbajooggu kaga jiraan dhaqaalaha/dakhliga guud ee dalka (GDP) inta u dhaxaysa 35% illaa 70% (NDP II, 2017).
Hay’adda Qurbajoogga Somaliland ee Wasaaradda Arrimaha Debadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL waxa ay fulinaysaa daraasado cilmi-baadhiseed oo ku saabsan arrimaha doorka qurbajoogga Somaliland iyo sida loo horumarin karo. Waxa ka mid ah daraasadahan sahan hawlgal Hay’addu ku qiimaynayso doorka qurbajoogga ee maalgashiga ganacsiyada kala duwan (Diaspora Business Investment Survey) kaasoo qaybtiisa 1aad laga bilaabay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa 15-kii October, magaalooyinka waaweyn ee gobolladuna ku xigayaan. Waxa kale oo qayb ka ah daraasaddan , in Hay’adda Qurbajooggu si buuxda u wada diwaangelinayso dhammaan ganacsiyada kala duwan ee dadka qurbajoogga muwaadiniinta ahi maalgashadeen guud ahaan dalka JSL maadaama oo ganacsiyada cusub ee sannadihii dhawaa gaar ahaan intii ka dambaysay 2010 ay aad usoo kordheen. Waxa ka mid noqon doonaa maxsuulka aan ka filayno cilmi-baadhistan inaan si sax ah u qiimaynno heerk qaybgalka qurbajoogga ee ganacsiga dalka, noocyada iyo waaxaha ganacsiga ay ugu badanyihiin (Types and Sectors), xadiga shaqo abuurka qurbajooggu sameeyeen, jaalliyadaha ugu badan qurbajoogga dalka soo maalgashaday iwm.
Sidaa darteed, waxa aannu si sharaf iyo qadarin leh uga codsanaynaa dhammaan muwaadiniinta sharafta leh ee ganacsiyada uu khuseeyo hawlgalkani inaad ku gacan siisaan oo u oggolaataan fursad wakhti hawlwadeenada ka socda Hay’adda Qurbajoogga ee xogta daraasaddan ururinaya. Sidoo kale, waxa aad ka diwaangelin kartaa ganacsigaaga Mareegta Hay’adda Qurbajoogga www.sldiaspora.org oo aad buuxiso foomka elaktarooniga ah form http://sldiaspora.org/index.php/database/somaliland-diaspora-business-survey2017 taasoo isla markaa fududaynaysa inaanu kaa war hello oo kugu soo booqanno meheradaada mudada ay daraasaddani socoto oo ah illaa December 31, 2017 haddii Alle Idmo. Waxa kale oo taageeraysa wada shaqaynteenna haddii aad nagala soo xidhiidho Lambarka Telefoonka ah 000000000 ama Email-ka sldiasporainvestment@gmail.com / info@sldiaspora.org
Ugu dambayn, waxa aannu u mahad celinaynaa maalgashadayaasha qurbajoogga ah ee nagu soo booqanaya Xarunta Hay’adda ee Qurbajoogga ee dhismaha Wasaaradda Arrimaha Debadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL si loo diwaangeliyo, isla markaana uga qaybgalaan daraasaddan.